Izinhla - Mytika Speak
Ikhaya / Izinkondlo / Izinhla
ubone ukuthi kuhle kangakanani?
Ukuqhubeka kwanoma yini,
ubuhle obuncane obubonayo.
Noma ngubani osondela kuye,
angikwazi ukusiza kepha athande ngokujulile.
awusoze wazi ngokweqiniso.
ubumsulwa buhlangana ne-Ego.
Amathegiukuqonda ukuzazisa ivesi lamahhala ukukhula komuntu siqu inkondlo izinkondlo ingokomoya